China Ikanam kichin foset nke igwe anaghị agba nchara na-emepụta na suppliers | Chengpai
isi mmiri ịsa ahụ
ngwaahịa ịsa ahụ ndị ọzọ
Ime ụlọ ịwụ ahụ
Squatting pans na urinal
ogige ịsa ahụ
Ugboro abụọ kichin
Aka aka nke igwe anaghị agba nchara
Laser ọnwụ ọrụ
ọrụ nka ígwè
Atọ ọrụ ịsa isi
Polish ịsa ahụ panel Anọ ...
Ikanam kichin foset nke Unyi ...
N'uko n'ịnyịnya ikanam retangu ...
Ikanam gburugburu ịsa ahụ isi na ...
Ikanam kichin foset nke igwe anaghị ata nchara
Nọmba nlereanya CP-F22
Isi ihe 304 igwe anaghị agba nchara
Ọrụ Mmiri oyi na mmiri ọkụ
Onu ogugu Na-alụbeghị di
Dị Oge a
.Dị Akụkụ kichin
Mbukota Akpa ụfụfụ na katọn
1. 1. Nkebụ amamiihe kichin kichin foset ka nke elu mma lubochi-free 304 igwe anaghị agba nchara, mee ka o guzoro ọtọ ọtụtụ akwa na akwa, na-ebelata nsogbu nke imebi pipụ ugboro ugboro, .
2. Ikanam edoziri na kichin kichin a.Ọ adịghị mkpa ike, ọ na-eji mmiri eme ihe ike iwepụta ọkụ eletrik. Mgbe mmiri na-akwụsị ịsọ, ọkụ na-apụ. Mgbe mmiri na-asọ site na pọmpụ mmiri, ọkụ ahụ na-eduga ga-agbanwe dịka ọnọdụ nke mmiri.
Mgbe mmiri mmiri dị ≤31 ℃, ọ na-acha anụnụ anụnụ mgbe niile;
mgbe ọ dị 32 ℃ ~ 42 ℃, ọ na-acha akwụkwọ ndụ mgbe niile;
mgbe ọ dị 43 ℃ ~ 50 ℃, ọ na-acha ọbara ọbara mgbe niile;
mgbe mmiri dị na mmiri bụ ≥51 ℃, ọ na-acha uhie uhie na ọkụ.
3. The elu arched spout imewe nwere ike bugharia 360 Celsius, na-enye mgbanwe na imi arụ ọrụCee, ezigbo ọrụ, mfe ije,na-enyekwu ohere maka ọrụ mmiri dị iche iche na kichin.
4. Ihe 90 ogo otu lever njikwa na-enye ezigbo mmiri eruba akara na igwe anaghị agba nchara drip-free valvụ maka kacha mma arụmọrụ. 100% nwalee tupu ịhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Enweghị nsogbu imewe ana achi achi no Leak, no ddọwara, nenweghị.
5. Tọ mmiri mmiri na-achịkọta mmiri ọnụ na-enweghị ịwacha mmiri na-egosi ịdị mma nke mmiri pọmpụ. Mara mma mara mma, ezigbo ọdịdị ya, ute nwa imecha nwere ike igbochi nchara na corrosion ma hụ na àgwà.
6. Imecha dị na-egbu maramara ma ọ bụ brushed. Ihe kpochapụrụ Ọdịdị na inogide seramiiki diski nye ezigbo ọrụ.Sleek na minimalist imewe agbakwunye ụdị ọ bụla kichin ihe ndozi; agaghị agbapụ dị ka ndị ọzọ plated imecha mgbeọtụtụ afọ ojiji.
7. Ike ịgba maka nnukwu nhicha dị ọcha, iyi aerated maka ihicha kwa ụbọchị; Ike itucha.
8. Akụkụ nke elu nwere ike ịbụ 360 Celsius, ezigbo ọrụ, mfe ije, suitable maka otu na okpukpu abụọ bezin kichin sink.
9. Ọzọkwa, a na-edozi katrij dị mma, na-enye ogologo oge na ọrụ dị nro ma dịkwa mfe.
10. Guzosie ike mbukota: Pee akpa na katọn
11. Mfe dị mfe,standard imewe mounts na otu-onu imi ma ọ bụ countertop.Ọ bụ arụnyere na usoro dị mfe na-enweghị mkpa plumber na ngwaọrụ pụrụ iche.
Nke gara aga: N'uko n'ịnyịnya Ikanam retangular ịsa isi
Osote: N'uko n'ịnyịnya anọ ọrụ alụlụ square ịsa ahụ isi
Brass Kitchen foset
Ikpa Mbelata Kitchen
Kitchen foset Head
Kitchen emekpa Top
Plastic Kitchen imi
Otu Kitchen Skin
otu nnukwu efere ịgbado ọkụ kichin sink nke igwe anaghị s ...
Enwe otu nnukwu efere kichin sink nke igwe anaghị s ...
kichin foset nke igwe anaghị ata nchara
drinking drinkingụ pọmpụ mmiri nke igwe anaghị agba nchara
Ugboro abụọ nnukwu efere kichin sink nke igwe anaghị agba ...
Ofdị igwe igwekota
Usoro mmezi nke nsị nsị
Wersa Panel VS Aka-ẹkenịmde ịsa Head